20 minamato Yeminyengetero ine simba yekumutsa vakafa. | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 20 minamato Yeminyengetero ine simba yekumutsa vakafa
Varoma 8: 11:
11 Asi kana mweya waiye wakamutsa Jesu kuvakafa uchigara mamuri, iye wakamutsa Kristu kuvakafa uchamutsawo miviri yenyu inofa neMweya wake unogara mamuri.
Tinonamata Mwari anomutsa vakafa. Mwari wedu ndiye tsime rehupenyu, nekudaro, kufa hakusi iko kuguma naye. Nhasi makumi maviri zvine simba munamato mapoinzi kuti vamutse vakafa inovavarira kunamai vane pamuviri avo vanachiremba vavaudza kuti mwana asati aberekwa afa, zvinowanongedzerwa kunaamai vane nhumbu vanotya kuti vachazvara. Kana iwe uri mune chero echikamu chepamusoro, ndinzwe ikozvino, semwana waMwari, iwe une mweya unoera muhupenyu hwako, mweya unoera ndiMwari mumiririri wezvishamiso. Mudzimu unoera ndiwo mweya wekumuka. Hapana chinhu mauri uye chakakomberedza chaunogona kufa kana iwe uine mweya mutsvene muhupenyu hwako. Naizvozvo isa maoko ako pachibereko chako uye ita kuti simba rekumuka remweya riwedzere kuburikidza neminamato.
Idzi minamato dzekunamatira vakafa dzichakutungamira paunenge uchirwa hondo yemweya kurwisa kufa kusati kwasvika, kufa kwepamberi uye kuberekwa. Dhiabhori haachazoba zvakare vacheche vako muzita raJesu. Iyi minamato inogona zvakare kunamatwa nekutenda pamusoro pemudiwa. Usarase tariro pana Mwari, Mwari wedu achiri kupindura minamato, hapana zvakamuomesera Iye kuti aite Iye ndiye alpha naiyo omega, Iye ndiye tsime rehupenyu, uye Akakunda rufu neguva, mirai mukuvimba namata iyi minamato yekumuka nhasi uye uchaona ruoko rwaMwari ruchishanda muhupenyu hwako.
20 minamato Yeminyengetero Yakasimba kumutsa vakafa.
1. Baba, Rega simba rako rorumuko riuye padumbu rangu muzita rakasimba raJesu.
2. Ndinosunga mweya wega wega wekufa uchifamba-famba paupenyu hwangu muzita rakasimba raJesu.
3. Ini ndinoraira chero muviri wese wakafa mumuviri wangu kuti udzokere kuhupenyu izvozvi !!! muzita raJesu.
4. Ruoko rwese rwakaipa rakaiswa pamwana asati aberekwa gamuchira kutinhira uye nemoto waMwari uye kupedzwa zvachose muzita raJesu.
5. Ini ndinoraira kuti chero chombo chakaipa chakagadzirirwa kumwana wangu asati aberekwa aparadzwe, muzita raJesu.
6. Ini ndinoramba mweya yega wega werufu neguva, muzita raJesu.
7. Ini ndinoparidza kudzoreredza kwemweya yezvose zvandakarasika muhupenyu hwangu muzita raJesu.
8. Baba, ita kuti Simba rako rekusika rishande mutsva mumuviri wangu wese muzita raJesu.
9. Baba, rega moto weMweya Mutsvene upinde murukova rweRopa rangu uye uchenese hurongwa hwangu, muzita raJesu.
10. Ndinozvinunura ini nemwana wangu asati aberekwa kubva kugeji yezvakaipa zveimba imwe neimwe, muzita raJesu.
11. Rega ruzivo rwese nezve mwana wangu asati aberekwa rubviswe kubva mundangariro dzese dza satan, muzita raJesu.
12. Ini ndinoraira zvimiti zvese zvakashata muhupenyu hwangu: Buda nemidzi yako yese, muzita raJesu!
13. Vatorwa vasingazivi mumuviri wangu uye mudumbu rangu, budai mese kubva kunzvimbo dzenyu dzekuvanda, muzita raJesu.
14. Ini ndinobuda uye ndinosuka muchetura wakashata muhurongwa hwangu, muzita raJesu.
15. Rega zvakashata zvese zvinotenderera mukufamba kweropa rangu zvinyururwe neropa, muzita raJesu.
16. Ndakafukidzwa neropa raJesu.
17.Mweya Mutsvene moto, kupisa kubva kumusoro kwemusoro wangu kusvika kutsoka dzemakumbo angu.
18. Ini ndinozviparadzanisa kure nemweya wega wega werufu nezita raJesu.
19. Ndinozviparadzanisa nekutuka kwese kwerufu, muzita raJesu.
20. Ini ndinozviparadzanisa kubva pese panowanikwa mweya mumwe muzita raJesu.
Baba ndinokutendai nesimba renyu rorumuko.
Previous nyaya20 mfm munamato mapoinzi vhiza
inotevera30 Kununurwa manamato emunongedzo pamusoro pekukura kusingadiwe mudumbu
Angel Kurume 18, 2021 At 9:14 pm
Ernest Chivabvu 23, 2021 nenguva dza 11:07 pm
Mushure mekutaura aya makumi maviri emagetsi minyengetero yakazara ndinotenda kuti hanzvadzi dzangu makumbo anotonhora anomuka muzita raJesu
NEMINYENGETI KUNA MAMA-DAUGHTER KUSHURE
Kununurwa Kubva muhurombo hweMunamato weHurombo